Creatine Kuhle: incazelo, abakhiqizi futhi ukukala. Yikuphi okungcono: creatine noma amaprotheni
Ezemidlalo Ukufaneleka, Yakha kwemisipha
Kuze kube manje, creatine sesibili ethandwa kakhulu ngemva amaprotheni whey yabadlali kanye zonke labo phila ngakhethi yokuphila asebenzayo. Lokhu kusho ukuthi i-product ngempela ukwenza umsebenzi walo ukwandisa yemisipha. abakhiqizi ezahlukene creatine e izimakethe zabo bathi umkhiqizo wabo - okungcono emakethe emhlabeni. Asithathe sihlolisise nomkhiqizi futhi umkhiqizo yohlobo ngalunye, xoxa nabo bese ukhetha brand engcono uhlobo ukuthi kufanelekile ukuthuthukisa imisipha yakho. Phela, sifanelwe ukusebenzisa kuphela creatine engcono!
incazelo umkhiqizo Jikelele
Creatine is kuhlelwe nengcosana emzimbeni womuntu. Ngaphezu leli nani kunalokho enkulu yalo kuqukethwe obomvu inyama, ikakhulukazi yenkomo. Lokhu kwanele ukusebenza evamile umzimba. Nokho, umuntu is bahileleke ezemidlalo futhi uhlela ukwandisa imisipha yabo mass, akwanele. Ngokwemvelo, kulesi simo kubalulekile ukuthola creatine ezengeziwe. Futhi ikhambi elilungile kungaba ukusetshenziswa creatine powder.
Creatine ngokwawo isithwali amaqembu phosphate bemisipha, ngalokho lunikeze nabo eneji olwengeziwe. Ngakho, ke uyakwazi ngokushesha ukwandisa imisipha amandla futhi wenze imisipha enamandla futhi okuhlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, creatine azigcina amanzi bemisipha, esheshisa sina umzimba ekusimameni. Ngenxa yalokho, imisipha ukhule ngokushesha, kodwa ngezithukuthuku ukubukeka ketshezi waklebhula kakhudlwana futhi egcwele.
Kuhle creatine Ukudayela kwemisipha
A impendulo ecacile yalo mbuzo kunzima ngempela ngoba kukhona emihle nemibi uhlobo ngalunye creatine, okwenza ukukhethwa the best kuzo zonke nemingcele kuvakashe ummeleli wendlunkulu engenakwenzeka. Lapha ubuswa nemingcele ezifana ubumsulwa umkhiqizo, yawo yamakhemikhali ifomula nangohlobo nesivinini Mastering. Elinye iphuzu elibalulekile izindleko creatine, ikakhulukazi esikhathini sanje. Futhi-ke, ikhwalithi yomkhiqizo. Ngakho, ukusebenza kwawo kuxhomeke kulokho umakhi.
Abakhiqizi best of creatine
Kuze kube manje, lo creatine engcono tikhicitwe abakhiqizi adumile njengo Weider, Ultimate Nutrition, Scifit, Dymatize , Universal Nutrition, Optimum Nutrition, Gaspari Nutrition , nabanye abaningi. Lezi abakhiqizi kungaba ithemba ngokuphelele, ngoba sekukudala efakazelwe ngokwabo emakethe emhlabeni kwezemidlalo umsoco, futhi ngenxa yalokho uyayazisa idumela layo futhi ungavumeli ikhwalithi embi umkhiqizo. Ngokuvamile wezwa umbuzo, yini nenkampani best - nomkhiqizi creatine? Ngamunye has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama athile ekukhiqizeni, ngakho ukusebenza lokho kanye kungcono, akunakwenzeka. Ngezansi uhlu lwesampuli umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, futhi uyokwazi ukukhetha ngokwabo creatine engcono. Isilinganiso futhi izokwethulwa engxenyeni esihlokweni sesibili.
amafomu akhona creatine
Namuhla siyazi eziningi izinhlobo ukukhiqizwa creatine. Emzimbeni, kungashiwo ihlukaniswe ibe ngumsizi amaphilisi. Umehluko phakathi bemvelo zamakhemikhali, abanayo, kodwa ngamunye la mafomu ungakwazi ukuhlukanisa ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo.
creatine oluyimpuphu eshibhile, ngesikhathi esifanayo hhayi eliphansi in izinga analogs.
Amaphilisi Creatine isimo sikuvumela, ngoba ivumela ukubala esinembile umthamo ayidingi ziyoncibilika emanzini. Ububi main yaleli fomu izindleko zayo kahle eliphezulu.
Ngu ifomula amakhemikhali anjalo isehlane izinhlobo ezinkulu compounds:
monohydrate Creatine - ifomu evamile nengabizi.
Mixed - sifaka konke okungenhla.
Nquma ukuthi yini kuyoba okungcono phakathi creatine anikezwe, kungcono ukuba ngumnikazi, esekelwe izinzuzo enikeziwe nemibi chemical ezahlukene kanye namafomu ngokomzimba. Eqinisweni, ngokuvamile umbandela esemqoka kule nezinqumo esizithandayo, yebo, intengo.
Njengoba kakade kuboniswe ngenhla, khetha creatine kangcono ukunxenxa mass kunzima. Noma kunjalo, kukhona udumo izilinganiso, okuyinto kuwufanele ekukholweni. Yiqiniso, nawe uyokusiza ukuba bazikhethele le creatine engcono. Isilinganiselwa sostayalyayut ngokuvamile ngenani ukuthenga umkhiqizo. Ethandwa kakhulu yilezi izilinganiso American Bodybuilding.com iwebhusayithi emhlabeni sawo esiningi umphakathi. Yingakho esihlokweni wanikeza 10 creatine phezulu best version yomthombo, ngoba ngo-October 2016:
Platinum 100% Creatine kusukela MuscleTech
Micronized Creatine Powder ngu Optimum Nutrition
Imisipha C-HCl lobunikazi Creatine HCL kusukela Kaged
Ezemidlalo CON-ezifihlekile kusukela ProMera
Ezemidlalo Kuhle Creatine ngu BPI
Creactor kusukela MuscleTech
Creatine + ngu EVLUTION Lokudla Okunomsoco
Creatine Micronized ngu Bodybuilding.com Foundation Series
Creatine Monohydrate kusukela RSP Nutrition
CELL-TECH ngu MuscleTech
Indlela yokusebenzisa creatine?
Abagijimi abangochwepheshe oluvame ukusetshenziswa ezimbili eziyinhloko reception wesifunda creatine - preloads noma ngaphandle kwalo. Ukuze ukusetshenziswa creatine enyakaza e amanzi noma isiphuzo sezithelo ezinoshukela, uketshezi kumele kube eziningi, futhi kumelwe nakanjani babe amnandi, njengoba indima ebalulekile ukuthuthwa creatine ku imisipha udlala insulini, okuyinto ikhishwe inqwaba ngokunembile ekuphenduleni edonsa amnandi.
Uma unquma ukuba ivuleke, kufanele kuqala ukusebenzisa 20 g ngelanga, ihlukaniswe 4 isabelo semihla ngemihla. Ngemva kwesonto kudle 2-3 amagremu ngosuku. Yidla ka creatine inyanga yonke, bese ukuvumela ama-receptor imisipha ukuphumula for 3-4 amasonto, ukuze bakwazi uphumule.
Ngaphandle ukulanda kudle 5 amagremu creatine nsuku zonke. Ngosuku ukuqeqeshwa, baphuze ngokushesha ngemva kokuba. Ngosuku imisebenzi khulula, ukuwaphuza ekuseni, ngokushesha nje lapho uvuka. Kulokhu, izinga imayelana 2 izinyanga. Khona-ke kufanele ukunikeza umzimba wakho ukuphumula for 3-4 amasonto.
imiphumela emibi creatine Abekho, kodwa kukhona ezinye izifo lapho ukusetshenziswa lo mkhiqizo awukho ezifiselekayo. Ngokwesibonelo, asthmatics yalolu ketshezi ungakwazi baxabane nomzimba, ngakho abantu ezikhonjwe sifo, akudingekile ukuyisebenzisa. Ngokufanayo, asikho isidingo ukusebenzisa ezincane creatine, kanye abantu nelincane izifo ezingathi sína kwababhemayo isibindi nezinso. Kakhulu creatine ezingavamile kungabangela sohudo, kodwa sihamba ngokushesha ngokuhamba kwesikhathi ingabuyeli. Libuye efiselekayo ukusebenzisa creatine kwabesifazane abakhulelwe kanye phakathi lactation, njengoba imiphumela yayo embungwini ayaziwa kuze kube manje. Ungakhohlwa ukuthi ngesikhathi creatine zinsiza is hhayi Kunconywa ukuba uphuze utshwala kanye caffeine njengoba dehydrate umzimba futhi ningathuli yona kahle.
Creatine namaprotheni - izici ngokuqhathanisa
Buza umbuzo, lokho kungcono - creatine noma amaprotheni, kunjani ukubuza ukuthi ubani onamandla - Batman noma Terminator, njengoba mikhiqizo bahluke ngokuphelele ngokwemvelo futhi kudingeka ngenxa yezizathu ezehlukene. Yingakho amandla ukukhetha uhlobo ezemidlalo kubalulekile kuphela lelitshe. Uma ufuna ukuzuza mafutha yemisipha, kuyatuseka ukusebenzisa protein ne creatine ndawonye. bodybuilders Professional ngesikhathi omiswe akavamile zisebenzisa amaprotheni njengoba iqukethe ethile carbohydrate, okungase kuthinte ukuma yokuncintisana esikhathini esizayo. Ngakho-ke, esinyathelweni omiswe kunconywa kuphela creatine namaprotheni esikhundleni amino acid. Futhi, isinyathelo omiswe zingasebenzisa high quality hydrolyzate lapho amaprotheni ekudleni kwakho akwanele. Lokhu amaprotheni ayiqukethe carbohydrate inhlabamkhosi ngokushesha ngokwanele. ethile yayo kuphela - intengo impela high.
Bench cindezela barbell bayiphendule: amathiphu kanye nemithetho
Zitholakala kanjani yemisipha ngaphandle umonakalo empilweni
Indlela Khetha Amaphrotheni Kuhle
Cindezela kubha: iphupho zonke wesifazane kwi 'umuvi' okhalweni kwesisu flat empeleni
Kanjani ukwakha emahlombe - iqoqo umzimba
Ukwakha umzimba: Indlela yokuthola isisindo
Ukufudumala - kuyini? Federation of Pankration of Russia
Emfanekisweni ezifundisayo izingane
Isinkwa Uzbek esingenamvubelo: ukupheka kuhhavini
Kuyini i-biotechnology? Izikhombisi-main nokufeza
Bayashintshana ekufukameleni amaqanda nedada. bayashintshana ekufukameleni Imodi: etafuleni. amaqanda Ithemu bayashintshana ekufukameleni duck
Indlela overclock wokugaya
Demeter - imimoya ekwazi kusimangaze ngisho ukushaqeka uwine
Yini eyingozi ku-hydrogen sulfide emoyeni kubantu?
Indlela ukuqoqa ingane esikoleni? Uhlu lwezinto ezidingekayo
Polyurethane foam - Izici & Imininingwane
Ukuze ufunde indlela yokuphatha migraine